How to Reduce Breast Size Naturally ရင်သားအရွယ်အစား သဘာဝနည်းနဲ့ သေးစေခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
How to Reduce Breast Size Naturally ရင်သားအရွယ်အစား သဘာဝနည်းနဲ့ သေးစေခြင်း
ဆရာ ကျွန်မအသက်က ၂၂ နှစ်ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်အမေ၊ နို့ စို့ ကလေးရှိပါတယ်။ ရင်သား အရမ်းကြီးနေပြီး လျော့တွဲနေပါတယ်။ သေးပြီးပြန်လည်တင်းရင်းအောင် ဘယ်လိုဆေးမျိုးအသုံးပြုရမလဲ ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်။
ပုံသာကြည့်ပါရန်။ မြန်မာလို မရေးရသေး။ အာမခံနည်း မရှိ။ ခွဲစိတ်နည်းရှိ။
1. Cardio and Strength-Training Exercises လေ့ကျင့်ခန်း
2. Aerobic Exercises အေးရိုးဘစ်
3. Massage နှိပ်ခြင်း
4. Ginger ဂျင်း (ချင်း)
5. Green Tea လက်ဖက်ရည်ကြမ်း
6. Flaxseed ပန်းနှမ်း
7. Breast reduction surgery ရင်သားသေးအောင် ခွဲစိတ်ကုသနည်း
9. Risks သတိထားစရာတွေ = အမာရွတ်၊ ထုံနေခြင်း၊ ကလေးနို့တိုက်ရခက်ခြင်း၊ ဘက်မညီဖြစ်ခြင်း၊ အနာကျက်နှေးခြင်း။
ကွန်မင့်ကနေ မဖွယ်မရာရေးတာတွေကို ဘလော့ပါမယ်။ ဆောရီး။